Usoro na ọnọdụ ojiji | KONGOLISOLO
Usoro na ọnọdụ ojiji
Usoro na ọnọdụ nke iji KONGOLISOLO
Edima KONGOLISOLOB & & Ihe KONGOLISOLOIse!
I. Iwu obodo KongoLisolo chọrọ nkwanye ùgwù na nkwanye ùgwù nye ndị niile so na saịtị a (weebụsaịtị).
N'ezie, KongoLisolo na-eme ka iwu dị n'ime ya maka ndị ọrụ ịntanetị niile nke mmadụ niile kwesịrị ịkwanyere ùgwù.
Site na isonye KongoLisoloị kwetara ịgbaso iwu ndị dị n'okpuru.
1. IHE (GROUP) KongoLisolo Chetara ndị otu n'ime ndị a:
A. Mkparịta ụka ahụ KongoLisolo bụ ndepụta ahaziri ahazi nke na-enye ohere mgbanwe nke ozi ọ bụla metụtara Africa ọ bụla ma ọ bụ n'ụzọ na-apụtachaghị. Ndebanye aha na weebụsaịtị (nzukọ) bụ onye ọ bụla na n'efu ...
A machibidoro iwu ịmepụta aha njirimara karịrị otu. Nke a gbagwojuru anya ndị otu ọzọ ma ọ naghị enyere aka wulite obodo nwere ntụkwasị obi.
B. Dị na mbụ, KongoLisolo anọgide na (website) free expression forum. Maka nke a, mbipụta ọ bụla nke na-esiteghị n'aka onye nchịkwa nke nzukọ (weebụsaịtị), na-agbakwunye naanị onye edemede ya.
C. A ga-eji nkwanye ùgwù na nkwanye ùgwù were gbanwere echiche na echiche ndị a.
D. Agaghị anabata ihe nlere na foto na-emebi emebi / vidiyo.
E. Anyị agaghịkwa ekwe ka okwu mkparị, ịkpọasị, nkwulu, ịkpa ókè agbụrụ, ịkpa ókè agbụrụ, ịkpa ókè, ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ, mkparị, mkparị, ikwutọ ma ọ bụ ọbụna okwu mkparị.
Ị pụghị ịdekọ ọdịnaya nke na-akọwa, na-akatọ, ma ọ bụ na-eme ka ọ bụrụ onye otu KongoLisolo. A na-emepụta ebe a (webataa) iji wuo ma ghara ibibi, dịrị n'otu ma ghara kewaa.
2. LANGUAGE Enweghị mgbochi asụsụ ọ bụla na KongoLisolo, Ma, ọ ka mma iji asụsụ ndị dị na ya KongoLisolo (Ederede 19) maka nghọta nke onye ọ bụla!
3. Ozi na egwu vidiyo
A. Biko kpachara anya ka ị ghara itinye otu ozi ahụ ọtụtụ ugboro.
B. All vidio gosipụtara na (weebụsaịtị) forum KongoLisolo ekwesighi gafere 10 nkejiMa ọ bụrụ na ọ gụ akwụkwọ, ọ nwere ike ịga ruo 15 nkeji!
4. Ọ BỤGHỊ MGBE Ọ BỤ Ọ BỤ ỌHỤRỤ
Ị nweghị ike biputere ọdịnaya ọ bụla maka ebumnuche azụmahịa (ire ere, mgbasa ozi ...).
Nke a gunyere mgbasa ozi maka azụmahịa gị. Akpadoro maka ọrụ ebere, nchịkọta ma ọ bụ asọmpi, ịkwado nkwado ọkọlọtọ, ịrịọ arịrịọ ma ọ bụ ọrụ na / ma ọ bụ spam na-akwadoghị na nnọkọ ahụ.
En Ọzọkwa, ị nweghị ike ịrịọ ego, ndị na-akpọsa ngwá ahịa ma ọ bụ ndị na-akwado ya, ma ị nweghị ike ịkwalite "pyramid" ma ọ̄ bụ usoro yiri nke ahụ, n'ihi na, ọ bụ, ọ dị mwute na ọ gaghị ekwe omume ịchọpụta na otu nzukọ ọ bụla na-arịọ onyinye; Ya mere, iji kpuchie ya KongoLisolobụ na KongoLisoloaghụghọ, anyị aghaghị ịjụ arịrịọ maka ọrụ ebere.
5. ND KWES :R:: Ikike na Nnwere onwe
A. Onye ọ bụla so KongoLisolo enwere ohere nke akọnuche, echiche, nkwenye, echiche na okwu.
B. Onye ọ bụla nwere ikike ịkwanyere ndụ ya ùgwù, nsọpụrụ ya, ùgwù ya na nchekwa nke onye ya ...
6. IHE NDỊ BỤ ECHICHE
A ga-etinye ntinye megide ndị na-akpọ recidivists: Warndọ aka ná ntị 2, mgbe ahụ, a ga-egbochi gị (WEBSITE) FORUM
A. Ọ bụrụ n’echiche na onye otu mebiri usoro ojiji ma ọ bụ iwu KongoLisolo ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ dị gị ka onye so na ya na-eme omume na-ekwesịghị ekwesị, biko gwa anyị site na ịpị njikọ a: Ahịa @kongolisolo.co
B. Ọ bụrụ na anyị amata na onye otu nke ọrụ ya ugbu a ma ọ bụ nke gara aga mebiri iwu nke KongoLisoloanyị na-akwụsị otu a ozugbo.
Iwu ndị a KongoLisolo enwere ike gbanwee n'oge ọ bụla site na nchịkwa nke KongoLisolo ma na-enweghị ọkwa. Otú ọ dị, iwu ndị ọhụrụ ga-adịrị ndị nke KongoLisolo n'oge na-adịghị anya.
8. IKWU NKE BỤ EBE
Jiri ezi uche gị ma nwee oge magburu onwe ya KONGOLISOLO Anyị na-akwado obere esemokwu ebe ọ bụ na ANY NOT agaghị elebara ihe unu chere ma ọ bụ etu unu siri ghọta ya, ma, anyị ga-aza ajụjụ maka ihe ndị anyị dere!
NB: The website (Forum), KongoLisolo ezubere maka ndị tozuru okè ma machibidoro ma ọ dịkarịa ala afọ 21
site: KongoLisolo Administration!
Nọvemba 26 08: 21